विवश वस्ती आइतवार, आश्विन १, २०७४
सडकछेउको एउटा चिया पसल । म चिया पिउँदै थिएँ । छेउमै थियो, फलफूल र तरकारी पसल । एकाग्र हुँदै चिया पिइरहेका वेला कताकता मधुर आवाजमा कसैले संवाद गरेजस्तो लाग्यो । अचम्म, छेउमै सजाएर राखिएका फलफूल र तरकारीबीच कुराकानी चल्दै रहेछ । मैले बडो आश्चर्य मान्दै तिनीहरूबीचको मीठा र गहन संवाद सुन्न थालेँ । आमनेसामने राखिएका स्याउ र टमाटरबीच संवाद चल्दै थियो । स्याउले टमाटरका राता आँखातिर हेर्दै सोध्यो, ‘आज तिम्रो भाउ कति हो ? हिजोअस्तिभन्दा घट्यो कि बढ्यो ?’
‘काँ घट्नु ? हिजोभन्दा आज २० रुपियाँ महँगिएको छु । मेरो त दिनदिनै भाउ बढिरहेको छ । यसरी दिनहुँ भाउ बढ्दा मलाई पनि आनन्द लागिरहेछ । किन्नेले पनि जतनसाथ किनेर लैजान्छन्, फ्रिजमा पनि सजाएर राख्छन् ।’ टमाटरले मक्ख पर्दै भन्यो र स्याउलाई सोध्यो, ‘तिम्रो पनि त भाउ बढिरहेको होला नि । अचेल त किन्नेले तिम्लाई छुन पनि त्यति आँट गरिरहेजस्तो लाग्दैन ।’
स्याउले आफ्नो रातो अनुहार झनै रातो बनाउँदै भन्यो, ‘मेरो त कुरै नगर । मनलाग्दी भाउ हुन्छ मेरो । बेच्नेलाई जति मन लाग्छ, त्यति भने पुग्यो । किन्नेहरूले खुरुखुरु किन्छन् । एकै दिनमा ५०–६० रुपियाँ बढिरहेको हुन्छ, मेरो भाउ । के भएको होला यस्तो ?’ स्याउ र टमाटर संवादमा व्यस्त देखिन्थे । म भने तिनीहरूका रमाइला कुराकानी सुनेर मक्ख र छक्क पर्दै थिएँ । त्यहीवेला टमाटरले भन्यो, ‘अब हेर्दै जानुस्, केही दिनपछि त हामीलाई कसैले पनि छुनै सक्दैनन् । कति बढ्छ, बढ्छ हाम्रो भाउ । अब केही दिनपछि हाम्रो भाउ सुनेर मान्छेले जिब्रै निकाल्छन् ।’
स्याउ मक्ख परिरहेको देखिन्थ्यो । उसले टमाटरको चम्किलो अनुहारमा क्वारक्वार्ती हेर्दै भन्यो, ‘हो, अब हाम्रो भाउ नमज्जाले चम्किने छ । दशैं, तिहार, छठ । के–के चाडपर्व आउँछन् अब । ती पर्वमा त हाम्रो भाउ गज्जबले नै बढ्छ । हामीलाई पनि महँगा दाम हालेर किन्दा आनन्दै लाग्छ, होइन त ?’टमाटर भने केही विस्मित देखियो । जिज्ञासु मुहारले उसले सोध्यो, ‘हैन, हाम्रो भाउ बढ्नु र चाडपर्वबीच के सम्बन्ध छ हँ ? अरू वेला हाम्रो भाउ त्यति बढेको हुँदैन । तर, चाडपर्व आयो कि हाम्रो भाउले आकाशै छुन्छ, भन्या । मलाई लाग्छ, हाम्रो भाउ बढ्नु र चाडपर्वबीच गहिरो नाता नै हुनुपर्छ । हैन भने चाडपर्व नजिकिँदा हाम्रो भाउ किन चुलिन्छ ?’
स्याउले पनि आश्चर्यमिश्रित स्वरमा भन्यो, ‘मलाई पनि यो कुराले वेलावेला रिंग्याउँछ । हामी मात्र होइन, चाडपर्व आउँदा अरू चिजको पनि भाउ बढ्छ । जुनसुकै चिजको मूल्यले पनि आकाश छुन–छुन खोज्छ । पक्कै पनि, भाउ बढ्नु र चाडपर्वबीच गहिरो सम्बन्ध जोडिएकै छ जस्तो लाग्छ मलाई । नभए अरू वेला ५० रुपियाँ पर्ने चिज चाडपर्वमा किन तीन गुना महँगिन्छ भन्या ।’ त्यही वेला, एउटा ग्राहकले स्याउका दाना छान्न थाले । स्याउ र टमाटरबीच तन्किरहेको संवाद पनि अचानक त्यहीँ स्थगित भयो । मेरो चियाको गिलास पनि रित्तिइसकेको थियो, त्यतिन्जेलसम्म ।